Usoro nke ọnụọgụ nhọrọ ọnụọgụ abụọ Vortex novelty 2018
Isi > Atụmatụ > Usoro nke ọnụọgụ nhọrọ ọnụọgụ abụọ Vortex novelty 2018
11.09.2018 · 0 · Ntinye niile maka September 2018
Usoro ahia nke ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ Vortex bụ ihe ọhụrụ nke 2018, ọganihu ọhụrụ nke ndị nyocha ahịa. Site n'iji ya eme ihe, onye ahia na-enweta uru dị ukwuu n'ahịa. Ọ bụrụ na ị na-agbaso iwu ndị dị mfe ma dị mfe nke usoro ahụ, uru ahụ nwere ike iru oke ọnụahịa.
Azụlarịrị ahia n'ahịa nkwekọrịta n'ọdịnihu dịka ihe eji emepụta ngwá ahịa nke azụmahịa na akụnụba ego. Otú ọ dị, ọtụtụ ndị na-abụghị ndị ọkachamara na-enweghị ọrụ nwere ọtụtụ nsogbu mgbe ha na-eji ngwá ọrụ a. Oge kachasị mkpa nke ịga nke ọma na mpaghara a bụ ngwa nke usoro dị irè maka nyochaa ahịa. Ha na-enwe ike inye ndị ahịa aka oke uru. Taa, maka gị, atụmatụ nke ọnụọgụ ọnụọgụ nhọrọ "Vortex". Ọ na-adabere na ndị ọkachamara, na-egosi na ọgbara ọhụrụ. Algorithm nke usoro a na-enye ohere nke kachasị mfe iji nweta ihe kachasị edozi na-eto eto. Nke a ga-aba uru nye ndị investors.
Vortex ọnụọgụ abụọ Nhọrọ Trading Strategy Strategy Algorithm
Ya mere, ọnọdụ bụ isi maka irè nke nkwekọrịta ọnụọgụ abụọ bụ nkọwa ziri ezi nke ụzụ njem nke ọnụahịa ọnụahịa. Ọzọkwa, anyị nwere ike ịnweta nkwekọrịta dị oke mma nke nkwekọrịta ahụ ma na-achọpụta mgbanwe mgbanwe nke ụwa n'ahịa ahịa, nakwa na mgbasa ozi ngwa ngwa nke ntinye okwu. Iji dozie nsogbu ahụ, anyị ga-eji otu nyocha ọrụ. Ọrụ ndị a ga-enwe ike ịchọta ngwa ngwa na ngwa ngwa ịchọta ebe ọnụọgụ ahịa ego ga-esi kwe omume na nke a na-emepụta usoro ọhụrụ na ndozi teknụzụ. Anyị na-ewetara gị otu ihe nchịkọta nke anakọtara kpọmkwem maka nke a:
MMAR (Ụkpụrụ Ntugharị Na-agagharị Na Madrid) bụ ọrụ nyocha nke a na-ejikọta ọnụ ọgụgụ na-agagharị oge iji kọwaa mgbidi ọkpụkpụ iji wepụta akara maka ịzụ ahịa na iji chọpụta ndị na-ere ahịa ahịa. Otu ihe, njirimara nke njirimara na-enye gị ohere ịnata data na ma usoro okwu-okwu na oge dị mkpụmkpụ azụ na ọnụahịa ọnụahịa nke akụnụba.
MACD 4 (4 agba MACD) - ga - eji dị ka ihe mgbaàmà inyeaka. Nke a bụ nsụgharị omenala nke MACD oscillator. Ngosipụta a na-eme ka o kwe omume inwe akara ngosi doro anya n'ụzọ doro anya na mpaghara nke mgbanwe nrịgharị. Nke a na-eme ka o doo anya na ịbanye na azụmahịa ahụ na atụmatụ ma mepee ohere nke ịzụ ahịa n'ọnọdụ kacha mma ahịa.
Onye na-ahụkarị ụcha bụ onye oscillator ọzọ. Ọrụ ya na atụmatụ bụ na ọ bụ ụzọ isi chọpụta ntụziaka nke ahịa ụwa. Ọ na-arụ ọrụ dị ka nyo maka ụzụ mkpọtụ mkpọtụ. N'ihi iji ọrụ nyocha, atụmatụ ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ Vortex gosipụtara arụmọrụ ka mma.
Nhazi nke usoro atụmatụ aghụghọ bụ dị ka ndị a:
Lezienụ anya, na usoro anyị ji tradingview.com dịka nhazi ikpo okwu maka nyocha ahịa. Nke a bụ n'ihi na ọ bụghị naanị iji nweta ngwá ọrụ ndị dị mkpa. Ya mere, anyị na-eme usoro kwesịrị ekwesị maka ịrụ ọrụ n'ozuzu ịzụ ahịa ọ bụla. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ịnwere ike ịrụ ọrụ a site na ọnye ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ. Nke a na - eme ka ọrụ nke ọnye ego dị na ahịa ọnụọgụ abụọ.
Ihe ngosi nke Vortex Binary Option Trading System
Iji rụọ ọrụ na nkwekọrịta ka ịbawanye uru nke ihe onwunwe, usoro ahụ na-emepụta usoro ihe mkpuchi ndị a:
Ahịa Stochastics nke Oscillatory na-egosi na mmepe nke ahịa na-arịwanye elu nke ahịa.
Usoro nke ọrụ MMAR na-emekarị mgbe ọ gbasasịrị n'otu ọkwa ọrịre gbanwere na-aga n'ihu, na-agbanwe, n'otu oge ahụ, agba ha na-acha akwụkwọ ndụ.
Ogidi teknụzụ nke ederede MACD 4C malitere na akara n'elu ọkwa ọkwa nke onwe ha.
Maka nkwekọrịta ọrụ iji belata uru nke akụrụngwa ahụ, atụmatụ ahụ na-emepụta usoro ihe mgbaàmà ndị a:
Ahịa Stochastics nke Oscillatory na-egosi na mmepe nke ahịa dị ala nke ahịa.
Usoro nke ọrụ MMAR na-emekarị mgbe ọ kwadoro na otu ọkwa ọnụahịa gbanwere na mgbatị ahụ, na-agbanwe, n'otu oge ahụ, agba ya na-acha uhie uhie.
Ogidi ndị ọkachamara nke histogram MACD 4C malitere ịmalite dị ala n'ogo nha nke ọnụ ọgụgụ ha.
Mgbe ị na-atụle ụgwọ nkwụghachi ụgwọ nke nkwekọrịta, tụlee oge ịmepụta oge nhazi. Anyị na-akwado ịrụ ọrụ na nkeji nkeji. Na ọnọdụ a, ọnụọgụ ọnụọgụ nhọrọ nhọrọ ọnụọgụ abụọ na-ebute amaokwu dị iche iche nke nkwekọrịta nkwenye statistrị ruru nke 30 nkeji. Ị nwere ike iji nkwekọrịta na mpaghara a na njedebe ọ bụla. Ọnọdụ kachasị mma nke ịzụ ahịa na nke a bụ ọrụ na ọnọdụ na mgbapụta nke 5-15 nkeji.
Iji chekwaa isi ala ma nweta ọnọdụ kachasị mma n'ọnọdụ ahia dịka ihe ize ndụ, anyị na-akwado itinye ụkpụrụ iwu dị iche iche iji dochie ọnụahịa nke ọnọdụ ahịa. Mgbe ị na-azụ ahịa ego ego kachasị elu, jiri nkwekọrịta nwere uru mbụ dị na ntanetịahịa gị. Mgbe ị na-ere ahịa na akaụntụ nnukwu ego, a na-enye ya ohere iji ọnọdụ ruo 5% nke ego ole maka ahịa.
Debanye aha ma malite ịmalite usoro Vortex
Otu esi esi na 200 gaa 500 rubles kwa ụbọchị
Ebee ka ị ga-ezu ike na November - N'ezie na Greece na BInomo bụkwa n'efu
Usoro ahia site na trend3.8 (75.71%) ...
Free atụmatụ maka ọnụọgụ abụọ nhọrọ
Free atụmatụ maka ọnụọgụ abụọ ...
Kedu ka ị ga - esi mee ego n'ụlọ
Ọnụọgụ abụọ nhọrọ ịgba alụkwaghịm ma ọ bụ?